ကိုနိုင်း – ယမ်းနှင်းဝေနေတဲ့နိုင်ငံမှ ကာရန်များ / လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအချိန်မရွေးယမ်းနှင်းတွေဝေနေကြသလို၊ကျည်မိုးတွေရွာချနေကြပါတယ်။ နွေခါင်ခေါင်လိုပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့မီးလောင်ကွင်းတွေများစွာလည်းဖြစ်ကျန်နေရစ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေငတ်မွတ်နေတာကတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်ရတဲ့ဘ၀တွေပါပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင် အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းချင်သူတွေကတော့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေပါပဲ။တိုင်းတပါးကကျူးကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကိုပြန်ခုခံတိုက်နေရတဲ့တရားသောစစ်ပွဲတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာတိုင်းရင်းသားညီအကိုအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေကြရသလို၊ကြီးနိုင်ငယ်ညှဉ်း၊ တောတွင်းဝါဒထွန်းကားသလိုဖြစ်နေတာကြာနေပါပြီ။
ဒီပြည်တွင်းမှာတောက်လောင်နေတဲ့ စစ်မီးတောက်ကလည်း ကမ္ဘာမှာအရှည်ကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေပါပြီ။မြန်မာပြည်မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်း ဒီပြည်တွင်းစစ်မီးကိုစေတနာမှန်နဲ့ငြှိမ်းသတ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ကြပါဘူး။ အခုတက်လာတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်မီးကိုငြှိမ်းသတ်လိုတဲ့စေတနာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်၊ဒီမိုကရေစီအရပ်သားအစိုးရမှာလည်း အာဏာအပြည့်အဝမရှိသလို၊ပြည်တွင်းစစ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့၊ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖန်တီးနေကြတဲ့လူတွေကို စစ်ပွဲတွေရပ်လိုက်လို့ အမိန့်မပေးနိုင်ပါသေးဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုဦးဆောင်ကျင်းပနေပေမယ့်၊အောင်မြင်မှုရဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီး စားပွဲဝိုင်းထိုင်နေပေမယ့်၊ထိုးစစ်,ခံစစ်,ကာစစ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့တွေ၊နယ်မြေလုပ်စားကွက်တွေလုယူနေတာတွေကြောင့်,ကြားကဆင်းရဲသားပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုသာနယ်မြေလုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာမနီးစပ်နိုင်ပဲ၊ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးဆိုသလိုဖြစ်နေဦးမှာပါ။
ဒါတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့ဘက်ကခံစားပေးတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကလည်း ဖွင့်ဟပြောဆိုနေကြပါတယ်။ စစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလည်း ဒုက္ခတွေရောက်ရတာပါပဲ၊ ဒီလိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ရတဲ့အထဲကမြင်ကွင်းလေးတခုကို ကဗျာဆရာခင်လွန်းက“ဆောင်းရဲ့ပုံတူ”ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုရေးပြသွားပါတယ်။
ကလေးကတော့ ကလေးအတွေး တွေးပြီးပြောတာပါပဲ။ အမေလုပ်သူကတော့ စစ်ကိုရှောင်နေရပြီး စစ်ပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ယောင်နေခဲ့တာပေါ့။ နှင်းတွေဝေနေလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ယမ်းငွေ့တွေမှောင်မည်းနေလို့လား။ လက်ရှိအချိန်ကာလမြင်ကွင်းကို မမြင်ရသလို၊ ရှေ့အနာဂတ်တွေ ဘာမှမမြင်ရအောင် နှင်းတွေပိတ်ဖုံးနေတယ်။ ဆောင်းမနက်ခင်းဆိုပေမယ့်၊ မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူး။ စစ်ပွဲထဲက အောက်ခြေလူတွေမှာရော၊ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ လူတွေမှာ ရင်ဘတ်ထဲမီးစကြီးထိုးထည့်ထားသလို ပူလောင်မြိုက်နေကြတယ်။
စစ်ပွဲတွေကြောင့် သောကတွေရောက်နေတာအပြင်၊ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းထဲကိုပါ တောက်လောင်နေတဲ့မီးတောက်တွေကူးစက်လာမှာလည်း စိုးရိမ်သောကရောက်နေကြရတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့အတွေးထဲမှာတော့ တောမီးလောင်နေတာကိုတွေးမိပြီး သူနေထိုင်ခွင့်ရှိရာဒုက္ခသည်စခန်းကို မီးကူးလာမှာစိုးရိမ်နေတယ်။ကြောက်လည်းကြောက်နေပါတယ်။
ဒီကဗျာဖွင့်ဖွင့်ချင်းအပိုဒ်မှာ ကျွန်တော့်ဆီကို အတွေးတစဖျက်ကနဲရောက်လာပါတယ်။ မျက်လှည့်ဆရာကဘယ်သူလဲ၊ သူဖုံးအုပ်ထားတဲ့ခြုံလွှာအနက်ကြီးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒါကိုစိတ်ဝင်စား ရင်ခုန်ပြီးကြည့်နေတဲ့ပရိတ်သတ်တွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီအတွေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေမတွေးပဲသိနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာအခုအချိန်ထိ မျက်လှည့်ဆရာရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံနေရတုန်းလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်လိုတွေးနေကြပါလိမ့်မယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အထိမျက်လှည့်ဆရာတယောက်ဖွင့်ပြတဲ့ခြုံလွှာအောက်မှာ ထွက်လာတာက ဆင်းရဲငတ်မွတ်မှုတွေ၊သေးငယ်ပိန်လှီနေတဲ့ဥနှောက်ထဲက ကော်ထုတ်လိုက်တဲ့အသိတရားအခွံတွေ၊ ပိုလီယိုဖြစ်နေတဲ့လူမှုရေးတွေနဲ့ ခေတ်အပုပ်အသိုးတွေက နံဟောင်ပြီးထွက်ကျလာ၊ ရတနာသေတ္တာထဲက တွင်းဟောင်းပက်လက်တွေနဲ့ ယမ်းငွေ့နံ့တွေထူနေတဲ့ တောင်ကတုံးတွေပဲတွေ့နေရပါတယ်။
ခြုံလွှာအနက်ရောင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ မျက်လှည့်ဆရာဖွက်ထားတာက လူတွေကိုသူလှည့်စားနိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ နန်းတော်ကြီးတွေရယ်၊ အစိမ်းရောင်တောအုပ်တခုနဲ့ စာအုပ်တအုပ်ရှိနေပါတယ်။
မျက်လှည့်ဆရာပြောနေတဲ့စကားတွေဆိုတာ နားထောင်ခဲ့ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြောင့် လူတွေရိုးအီနေကြပါပြီ။ မျက်လှည့်ဆရာဖွင့်ပြမယ့်ခြုံလွှာကြီးအောက်မှာ ဘာများထူးခြားတာတွေပါလာလေမလဲဆိုတာကို သိချင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ငေးကြည့်နေကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဖွင့်ပြမယ့်အထဲမှာပါနေကြတာတွေကိုတော့လူတွေသိနေကြပါတယ်။
မျက်လှည့်ဆရာပြောနေတဲ့စကားတွေကလည်းကြားနေကြစကားတွေပါပဲ။ စကားတွေဆိုပေမယ့် ဝါကျတကြောင်းထဲကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတာပါပဲ။ပြောနေတိုင်းမှာလည်းမျက်လှည့်ဆရာနောက်မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကပေါ်ပေါ်လာတယ်။
နောက်ခံတီးလုံးက ဗုံးကွဲသံလို တဝုန်းဝုန်းနဲ့မြည်နေတယ်
အမှန်တော့ဒီပြကွက်ဟာ လူတွေအတွက်ရိုးအီနေပါပြီ။ ရိုးအီနေတဲ့ပြကွက်နဲ့ ပြောနေတဲ့စကားတွေဘယ်တော့ပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကိုပဲ ပရိသတ်တွေကစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ ဒီတခါခြုံလွှာဖွင့်ရင်ကျိန်စာအတိုက်ခံထားရတဲ့ မင်းသမီးလေးရဲ့အသံအစစ်ကိုကြားရလေမလား။ ချိုးငှက်လေးရဲ့တွန်ကျူးသံကိုကြားရလေမလား။ မျက်လှည့်ဆရာနောက်ကပေါက်ကွဲနေတဲ့ဗုံးတွေအစား တောအုပ်စိမ်းကထပြန်သွားမလား၊စာအုပ်စိမ်းကြီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မလား။ ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။စောင့်ကြည့်နေသူတွေရဲ့စိတ်မြည်သံတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာတမ်းတနေတဲ့အသံတွေ။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြင်ချင်နေကြပါတယ်။
ပိစ်(PEACE)ဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ကို မြင်ချင်နေကြပါတယ်။ ဒီအထိမ်းအမှတ်ကိုမြင်ချင်ကြလို့စောင့်နေခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းခှနှစ်ဆယ်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အခုအချိန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တွက်ရခက်တဲ့ပုစ္ဆာတပုဒ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာပြည်တွင်းစစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းလိုသူတွေအတွက်ကိုယ်ချင်းစာမယ်ဆိုရင်အတ္တတွေလျှော့ပစ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြင်ရပြီဆိုရင် ပြည်သူတွေအဖက်ဖက်က ခံစားမွန်းကြပ်နေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
မူရင်း။ The Sun Rays Journal, Vol 1. No. 183. January 20, 2018.
၁။ ခင်လွန်း(ဆောင်းရဲ့ပုံတူ)၊Khin Lunn ဖေ့ဘုတ်၊၂ဝ၁၈။
ကိုနိုင်း – ယမ်းနှင်းဝေနေတဲ့နိုင်ငံမှ ကာရန်များ